Kuwedzera Big Data Value nePepperdata's Big Data Stack Optimization uye Automated Tuning | Martech Zone
Kana yakakwenenzverwa nemazvo, hombe dhata rinogona kukunda mashandiro. Big data ikozvino inoita basa rakakosha mune zvese kubva kubhengi kuenda kune hutano kune hurumende. Iyo kukura kunoshamisa kwekufungidzira kwemusika wepasirese wedata, kubva pamadhora mazana masere nemazana masere emadhora makumi mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemazana matatu kusvika mazana mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nemazana mana emadhora mazana maviri nemakumi mairi nemaviri, chiratidzo chinoratidza kuti data hombe rave gadziriro yechigarire munzvimbo yemabhizinesi.
Nekudaro, kuti ugadzire iyo yakakosha kwazvo kubva kune rako hombe dhata, yako hombe dhata stack inoda kugara ichirongedzwa uye kukwidziridzwa, kungave kuri mugore kana munzvimbo. Apa ndipo panopinda Pepperdata. Pepperdata inopa masangano ane yakazara uye otomatiki makuru data data optimization. Iyo chikuva inopa kusingaenzanisike kucherechedzwa uye otomatiki tuning kuve nechokwadi chako hombe dhata yezvivakwa, maapplication, uye maitirwo anofamba mushe mushe uye nemazvo, kuve nechokwadi SLA-nhanho kuita kwechero kunyorera apo uchichengeta mutengo unogadzirika.
Kunyatso simbisa data hombe kunoda kucherechedzwa uye kuenderera kugadzirisa. Izvi zvakaoma pasina chaicho maturusi. Pepperdata inopa iyo yakazara stack yezvishandiso, kuburikidza neyedu suite ye pa - nzvimbo uye zvigadzirwa zvegore: Platform Spotlight, Kugona Optimizer, Query Kutaridzika, kuyerera Kutaridzika, uye Chikumbiro Spotlight.
Pepperdata Platform Spotlight inobata iwe ku360-degree maonero eako makuru data data. Iwe unoona zvese, kusanganisira mashandisiro emashandisirwo, enhoroondo uye chaiwo-nguva kudiwa kwemasumbu ako, uye kuti ndeapi mashandiro ari kumhanya pamwero wakazara uye kuti ndeapi maapplication ari kutambisa zviwanikwa.
Iwe unowana yakadzama interface inoratidzira akakosha ruzivo eese ako masumbu. Uye kana iwe uchida kunyatsoita, iwe unogona kudhirowa pasi uye kuchera zvakadzama kuti uongorore chero hombe dhata application kuti unzwisise mashandiro ayo mumamiriro eiyo sumbu. Pese panomuka nyaya dzekuita, Platform Spotlight inoburitsa pakarepo yambiro yekukuzivisa iwe kuti uite mhinduro nekukurumidza uye nekukurumidza.
Kubva pane chaiyo-nguva yekuita data, Platform Spotlight inogadzira masisitimu akakodzera ekupa kodzero kumidziyo, mitsetse, nezvimwe zviwanikwa, zvichisimbisa mashandiro uye zvisina musono mashandisirwo pachinwiwa chakaringana zviwanikwa. Inotarisawo dhata rekuita kuti uwane maitiro ekukura uye nekufungidzira nenzira kwayo ramangwana zviwanikwa zviwanikwa pachishandiswa, mutoro webasa, uye maitiro.
Pepperdata Kugona Optimizer
Manual optimization yemahombe data masutu haisisiri sarudzo inoshanda munyika yanhasi yemakwikwi. Kumhanya kuri kwekukosha kana zvasvika pakushandisa uye kuwedzera rako hombe dhata. Pepperdata Kugona Optimizer ichienderera mberi nekuteedzera uye kugadzirisa ako makuru e data cluster zviwanikwa nekukurumidza uye kwakaringana shanduko shanduko, zvichikonzera yakawanda se50% hombe dhata sumbu kuburitsa uye yakawanda yakatorwazve kutambisa kugona.
Pepperdata Capacity Optimizer zvakare inoburitsa yakagadzirirwa autoscaling yemitoro yebasa inomhanya mukati megore. Kwakajairwa auto-kuyera inopa kumwe kunosimba kwevatengi kunoda kune avo makuru data data rekutakura. Zvisinei, hazvina kukwana. Pepperdata Capacity Optimizer zvine hungwaru inowedzera kuwedzera kweacoscaling kuona kuti maodhi ese ashandiswa zvizere pasati pasikwa mamwe maodhi, zvichidzivirira kumwe kutambisa uku uchicheka imwe mari.
Cloud inopa vanopa zvivakwa zvinovakirwa pakakwirira zvido zvevashandi. Zvinonyanya kudiwa zvinozadziswa, asi kufungisisa pamusoro kunogadzira marara akawanda kana paine zviwanikwa zvakawanda zvasara. Unyanzvi Optimizer inokwanisa kutora zviuru zveesarudzo pasekondi, ichiita chaiyo-nguva ongororo yekushandisa zviwanikwa kugadzirisa mashandisirwo eCUU, ndangariro uye zviwanikwa zveI / O pane masumbu makuru edata. Mhedzisiro yacho ndeyekuti kuyera kwakaringana kunogadziridzwa uye marara anobviswa.
Pepperdata Query Inotarisa
Mibvunzo yakakosha pazvinhu kana uchitaura mune yakakura dhata mamiriro. Mibvunzo inokumbira uye kutora data kuti ubatsire kuita mutoro webasa nemaitiro uye kusimbisa maapplication. Mibvunzo isina kugadziriswa inogona kukonzera kuwanda kwebasa uye maapplication kuti asare. Pepperdata Query Inotarisa inogonesa vashandisi kunyatsoongorora mukati memubvunzo wega wega uye kuwana ruzivo runonzwisisika nezvekuitwa kwayo uye kuita kwese kwedhatabhesi.
Pepperdata Query Spotlight inobatsira iwe kugadzirisa, kugadzirisa, uye kugadzirisa mhinduro dzemitoro, kusanganisira Hive, Impala, uye Spark SQL. Nemibvunzo ichiita mabasa ayo nekukurumidza, mitengo inoderedzwa zvakanyanya, kungave kuri mugore kana pane-nzvimbo.
Query Spotlight inobvumira vanogadzira kuti vatarise zvakadzama mukuronga kwemubvunzo uye neruzivo rwekuita, nekukurumidza kuona matambudziko ehurongwa hwemibvunzo, gaji yemubvunzo mashandiro, kunongedza mabhatani uye nyaya dzinopa kunonoka kubvunza, uye nekukurumidza nguva yekugadzirisa. Neichi chishandiso, vanoshanda vanokwanisa kudzikisira pasi mibvunzo ine matambudziko nekukasira, kunyangwe mune yakawanda-mushandisi nharaunda. Nemibvunzo yekuita kwemubvunzo, ivo vanogona kukwidziridza zviumbwa zvemusumbu uye nekuvandudza kugadzirwa.
Pepperdata kuyerera Kutaridzika
Pepperdata kuyerera Kutaridzika inopa IT mashandiro uye ekuvandudza zvikwata rakabatana uye rakadzama dashibhodhi kuti vaone avo Kafka masango metric ane padyo-chaiyo-nguva kuoneka. Mhinduro yacho inoita kuti vakwanise kuita broker hutano, misoro, uye zvikamu.
Ichi chishandiso chakanakisa sezvo telemetry dhata inogadzirwa naKafka iri hombe uye isingasvikike nyore, kunyanya mumasumbu makuru ekugadzira. Ruzhinji rweKafka performance yekutarisa mhinduro dzinotadza kuendesa iwo anodikanwa-metric, kuoneka, uye njere kumhanyisa kunyorera maficha kusvika padanho repamusoro rekuita.
Kutenderera Inotaridzika ine simba reKafka performance yekutarisa inobvumidza vashandisi kumisikidza Kafka mashandiro emethriki uye kuita yambiro yeasypical Kafka maitiro uye zviitiko. Aya machenjedzo anoita kuti zvive nyore kune vashandisi kuona zvine mutsindo kuongorora uye kuona zvisingafungidzirwe IT zvivakwa kuchinja uye kukanganisa.
Pepperdata Chikumbiro Kutaridzika
Pepperdata Chikumbiro Kutaridzika inounza yakazara, yakazara yakazara pikicha yemapurogiramu ako ese munzvimbo imwechete, yakabatana Nemhinduro iyi, iwe unoongorora mashandiro eapp yega yega uye unoongorora zvinhu 90% nekukasira, zvichikonzera kugadziriswa nekukurumidza uye zvirinani kushanda kwakazara.
Pepperdata zvakare inopa basa-yakatarwa kurudziro yega yega app uye inoita kuti iwe ugadzire zviyeuchidzo zvinoitwa neakasarudzika mafambiro uye mhedzisiro, zvichidzivirira zvakanyanya chero njodzi yekutadza. Pepperdata Application Spotlight inokubatsira kuti ushandise zvakakwana mashandiro ekushandisa pane akawanda-maroja masystem, zvisinei nekwaunomhanyisa mabasa ako (kureva, pane-nzvimbo, AWS, Azure, kana Google Cloud).
Iyo Pepperdata Big Data Optimization Kubatsira
Pepperdata's hombe data automation mhinduro dzakabatsira masangano makuru kumakambani mazhinji maindasitiri, kusanganisira makambani eFortune 500, kusimudzira nekukwirisa mashandiro emahombekombe avo e data. NaPepperdata, makambani makuru uye madiki anonakidzwa nekuchengetwa kukuru muhomwe yedhata yezvivakwa, kushandisa MTTR (Zvinoreva Nguva yekugadzirisa), nekuvandudza mashandiro uye kubudikidza.
Pepperdata akabatsira imwe Fortune 100 tech kambani chengetedza $ 3.6 mamirionin mune kuchengetedza kwehardware uku uchipa granular kuoneka mumasumbu makuru, mashandiro, uye kusakwanisa.
Bhizinesi reFortune 100 rekutengesa rakasimudzira mashandiro ehurongwa hwayo hukuru hwepepa nePepperdata. A 30% kuwedzera mukubuda yakagonesa kambani kumhanyisa mamwe maapplication uye mitoro yebasa, kutema MTTR ne92%, uye kuwana $ 10 miriyoni yekuchengetedza mukushandisa kwezvivakwa.
Kambani yepasi rose yehutano akavimbisa 24/7 kuwanikwa yeayo anoshandisa-kuponesa maficha uchishandisa Pepperdata's kugona kuronga uye optimizer mhinduro. Maitiro akakosha anonakidzwa neyakagadziriswa nguva yekuvandudza uye chaiyo-nguva yekuzivisa inoburitswa kana tsika tsika dzasvika, kudzivirira kutadza.
Kwirisa Iyo Kukosha kweYako Big Data Izvozvi
Big data ndeye ramangwana uye maindasitiri ese ari kufamba achienda kwariri. Asi kukura uku kunouya nemutengo mukuru. Iwe unofanirwa kuvhura simba uye kukosha kwedata rako hombe kana sangano rako richizopona uye kuva rakashinga, kunyanya munguva dzino dzakaoma.
Izvo zvakanyanya kuomarara hombe-dhata kunyorera kunofamba kuenda kune iro gore, iko kuwedzera mukana wekusarudzika kwenzvimbo zviwanikwa. Mu2019 chete, kurasikirwa kunofungidzirwa kumarara emvura kwakasvika pamadhora gumi nemana emadhora. Sezvo hupfumi pasirese hwuchatanga kudzoka kubva padenda, masangano anofanirwa kukwidza mutambo wavo mukuru wedata sezvo munhu wese achikwikwidza kumisazve nzvimbo dzawo mumaindasitiri avo.
Mabhizinesi anofanirwa kuziva kuti mitengo inongokura chete kana ikasagadzirisa zvakanaka. Bhizinesi rinofanirwa kushandira kutora muchina-kudzidza-inemagetsi mhinduro iyo inogona kukurumidza kunongedza kuti ndeapi masumbu ari kutambisa nzvimbo kana zviwanikwa, nepo zvine simba kugadzirisa kugadzirisa zviwanikwa zviwanikwa.
Bata Pepperdata kuti uone kuti edu makuru data optimization mhinduro anogona kukwidza bhizinesi rako kune iro nyowani nhanho.
Saina Saina YeMahara Pepperdata Trial
Tags: zvoga Tuningawsbig datadhata hombe automated tuninghombe data otomatikiyakakura data optimizationhombe dhatahombe dhata stack optimizationdata zvivakwagoogle cloudkafkazvinoreva nguva yekugadzirisamttrpepperdataPepperdata Chikumbiro KutaridzikaPepperdata Kugona OptimizerPepperdata Platform SpotlightPepperdata Query InotarisaPepperdata kuyerera Kutaridzika
Mira Kugadziridza Makore muBhizinesi pane Yako WordPress Siti neiyi Shortcode